Ismiidaamin Waqtigeedii ka hormartay | KEYDMEDIA ONLINE
Ismiidaamin Waqtigeedii ka hormartay
Keydmedia (Muqdisho) Xalay fiidkii ayaa guri ku yaala agagaarka Masaajidka Nasrudiin oo ku yaala inta u dhaxeysa isgoyska Baar-ubax iyo Warshadii hore eeTaraqa iyo Sigaarka.
Waxaa la sheegay in qaraxa uu ka dhashay Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa isla markaana la qorsheynayay in lagu fuliyo ismiidaamin lala beegsan lahaa xarumaha Dowlada iyo ciidamada shisheeye ee Magaalada Muqdisho.
Goobta uu Gaarigaasi ku qarxay ee agagaarka Masaajidka Nasrudiin ayaa waxa ay tahay goob si weyn ay ugu badan yihiin horjoogayaal ka tirsan xoogaga Dowlada ka soo horjeeda, waxaana si weyn ugu dhaw guriga uu qaraxa ka dhacay mid ka mid ah Guryaha uu Xasan Daahir ka daganyahay gudaha Muqdisho.
Hadal heynta ugu weyn ee dadka reer Muqdisho ay saakay afka ku hayaan ayaa waxa ay tahay falkaasi fashilmay ee xligiisii ka soo hormaray, walow badanka dadka ay si weyn uga baqdin qabaan ka hadalka arinkaasi in ay ku sii xeeldheeraadaan sabab ammaan darteed.
Guriga falka uu ka dhacay ayaa la sheegay in gabi ahaanba uu burburay isla markaana ilaa iyo hadda aan xog badan oo la aamini kara aan laga heyn qasaaraha dhabta ah walow warar kale duwan ay soo baxayaan.
Horaantii sanadkan ayeey aheyd markii Guri ku yaala gudaha Suuqa Bakaaraha uuna ku sugnaa Mukhtaar Roobow Cali (Abuu-mansuur) uu ka dhacay qarax ceynkan oo kale ah misna sababay qasaaro nafeed.
Gurigaasi ayaa hada lagu sameeyay dib u dhis balaaran waxaana loo badalay goob ganacsi isla markaana milkiilihii Guriga waxa uu ka tanaasulay kiradii uu ka qaadan jiray kooxaha hubeysan ee daganaa Gurigiisa.